၅။ MAB mobile banking အားရွေးချယ်၍ click နှိပ်ပေးပြီး "Continue" အား ထပ်မံနှိပ်ပေးပါ။
5. Please select and click MAB mobile banking and then click "Continue".
၆။ မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော အချက်လက် အကျဉ်းချုပ်အား ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးနောက် "Pay With MAB mobile banking" ကို နှိပ်ပေးပါ။
6. Kindly check your provided information summary and then click "Pay With MAB mobile banking".
၇။ မိမိ MAB mobile banking wallet account ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ရရှိထားသော User ID နှင့် PIN number အား ထည့်သွင်းပေးပြီး Submit နှိပ်ပေးပါ။
7. Please fill User ID and PIN number that you got while registering MAB mobile banking wallet account and then click "Submit".
၈။ ထို့နောက် MAB မှ သင် Account မှတ်ပုံတင်စဉ်က အသုံးပြုခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဂဏန်း ၆ လုံးပါ OTP code တစ်ခုပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး Enter OTP ဆိုသည့် အထဲသို့ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ ထို့နောက် Submit အား နှိပ်ပေးပါ။
8. MAB will send you an OTP code which contains6digits number and fill it into Enter OTP field. Then click Submit.
၉။ နောက်ဆုံးအဆင့် အနေဖြင့် မိမိ၏ လက်မှတ် ဘောင်ချာအား ရယူခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူမှု ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
9. Finally by getting your confirmed ticket, purchasing complete.